Cameroon oo halis ugu jirta “xagjirnimo” - BBC Somali
Cameroon oo halis ugu jirta “xagjirnimo”
4 Sebtembar 2015
Lahaanshaha sawirka Boko Haram Video
Image caption Ururka Boko Xaraam ayaa weerarro ka fuliyay dalka Cameroon
Hay'ad caalami ah ayaa ka digtay in dalka Cameroon uu khatar ugu jiro xagjirnimada dhanka diinta ah.
Warbixin ay soo saartay Hay'adda International Crisis Group ayaa lagu sheegay in firqa diimeedka Suufiyada ee ka jira dalka Cameroon uu loolan adag kala kulmayo kuwa aaminsan afkaarta xagjirnimada ah.
Hay'adda International Crisis Group ayaa ka digtay in kala qeybsanaan weyn ay ka dhex abuurmeyso firqooyinka kala duwan ee Islaamka iyo weliba Kiristaanka Cameroon.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in hogaamiyayaasha diinta Kiristaanka ee dalkaasi ay dhiirigeliyaan naceyb ka dhan ah Muslimiinta.
Weli dalka Cameroon kama aanay dhicin rabshado waaweyn oo dhanka diimaha ah, balse hay'adda International Crisis Group ayaa sheegeysa in dowladda dalkaasi looga baahan yahay in ay xoogga saarto sidii ay uga hortagi lahayd dagaal diimeed dhaca.
Warbixinta ayaa ugu baaqday dowladda Cameroon in aanay ku ekaan dagaalka ka dhanka ah Boko Xaraam, balse ay sidoo kale isfahan ka dhex abuurto diimaha dalkaasi, si ay uga gaashaamato waxa ka socda dalalka deriska la ah ee Nigeria iyo Jamhuuriyada Afrikada Dhexe.
Kumannaan qof ayaa sanadihii lasoo dhaafay ku dhintay rabshado diimaha ku saleysan oo gobolkaasi ka dhacay.